China China Wholesale Yepamusoro Hunhu Kukwikwidzana Mutengo Mutsva Apple Apple vagadziri uye vanotengesa | AGR
China Wholesale Yepamusoro Yemhando Yemakwikwi Mutengo Mutsva Apple
Kukosha kwehutano hwemaapuro
1, apuro imhando yezvakaderera macalorie chikafu, yega yega 100 gramu inogadzira 60 kcal huwandu hwekupisa.Apple zvinovaka muviri mune yakasungunuka, iri nyore kutorwa nemuviri wemunhu, unozivikanwa se "mvura mhenyu" .Inobatsira kuputsa sarufa uye gadzira ganda rakatsetseka uye nyoro.
2, apuro rine "huchenjeri michero", "chiyeuchidzo chibereko" zita rekurumbidza.Kudya mamwe maapuro kwave kuchizivikanwa kwenguva refu kuti kuvandudza ndangariro nehungwaru. Maapuro akapfuma mushuga, mavitamini, zvicherwa uye zvimwe zvinovaka muviri zvakakosha kuuropi.
3. Maapuro akapfuma mu zinc. Zvinoenderana nekutsvaga, zinc chikamu chezvakawanda zvakakosha ma enzymes mumuviri wemunhu uye chinhu chakakosha kusimudzira kukura uye budiriro.
4. Kunhuwirira kwamaapuro mushonga wekupererwa uye kushushikana. Nyanzvi dzakawana mushure mekuyedza kwakawanda uko, pakati pehwema hwakawanda, hwema hwemaapuro hwakakanganisa zvakanyanya pfungwa dzevanhu, hune mhedzisiro yakajeka pakubviswa kwekushushikana kwepfungwa. kunyorera kwakaratidza kuti mamiriro evarwere vane kushushikana kwepfungwa akavandudzika zvakanyanya mushure mekunhuhwirira hwema hwemaapuro, mweya wakasununguka uye unofara, uye mweya wekushushikana wakabviswa
5. Iyo malic acid mumaapuro ine maitiro ekuchenesa.Vanhu vazhinji vanonetseka nezve njodzi yekuora kwemeno nekuda kwe acidity yemapuro. Maapuro anoshandiswa nechizi anogumira acidity, uye kudya maapuro kunogona kubatsirawo kuchenesa meno ako zvinobudirira.
Vitamini C mumaapuro ndiko kuchengetedzwa kwemoyo, varwere vechirwere chemoyo vane hutano chinhu.
Vanhu vaidya maapuro akawanda vaisatombogona kubatwa nechikosoro pane avo vasina kudya kana maapuro mashoma. Nekuda kweizvozvo, mamwe masayendisiti navanachiremba vakadaidza maapuro "omni-directional michero ine hutano" kana "general practition" .Zvino kusvibiswa kwemhepo. chakanyanya kukura, kudya maapuro akawanda kunogona kusimudzira mweya wekufema uye kushanda kwemapapu, kudzivirira mapapu kubva kuguruva uye nesosi mumhepo.
Pashure: Export 2020 chirimwa chitsva cheapuro michero nemutengo wakanaka
Zvadaro: Natural Natural Healthy Premium Organic Mbeu Yakajairwa White Garlic Nyowani
Export 2020 chirimwa chitsva cheapuro michero ine goo ...